Ra’isul Wasaare Sharmaake oo kulan la qaatay Xildhibaanada 2-da Aqal ee laga soo doortay Gal-Mudug.[Masawiro]
Muqdisho:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa kulan la qaatay Xildhibaanadda labada Golle ee dhawaan laga soo doortay deegaanadda Gal-Mudug, waxana uu raiisul wasaaruhu ka codsaday Xildhibaanadda in ay taageeraan barnaamijkiisa Siyaasadeed maadama uu kamid yahay Murashaxiinta u taagan xilka Madaxweynaja Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Qaar kamid ah Xildhibaanadda laga soo doortay Galmudug oo kamid yihiin Mudane C/Waaxid Cilmi Cumar (Goonjeex), Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid), Mudane Axmed Macalin Faqi oo dhammaantood kamid ah Xubnaha labada Golle oo madasha hadallo ka jeediyey ayaa taageeray barnaamijka siyaasadeed ee murashax Sharmaarke.
Mudane Cumar ayaa u hambalyeeyey Xildhibaanadda la soo doortay, isagoo hoosta ka xariiqay in dalka uu horumar ballaaran gaarsiin doono haddii uu helo kalsoonida Xildhibaanadda.
Wuxuna dhinaca kale ku dheeraaday howlihii kala duwanaa ee u soo qabsoomay intii uu hayay xilalka Qaranka. Isla markaana uu inta harsan horey usii dhamaystiri doono, iyadoo la tashi guud iyo aragti mideysan lala sameynayo dhinacyada Siyaasadda iyo bulshada Soomaaliyeed. Musharax Cumar Cabdirashiid ayaa horey kulan noocan oo kale la soo qaatay xildhibaanada labad gole ee maamulada Puntland iyo Jubbland.